12:03 PM on January 11, 2019
1:19 PM on December 29, 2018
11:59 PM on December 21, 2018
what is housekeeping job :
housekeeping marilynne robinson summary
8:18 AM on December 15, 2018
10:38 PM on June 13, 2017
11:05 AM on June 3, 2017
1:42 PM on February 18, 2017
9:13 PM on October 17, 2015
â??OROMOON FIRA HINQABU YOO WALII ISAATII MALEEâ??
Posted on October 17, 2015 | Edit
Waggoota 23 darban keessatti lubbuun ilmaan Oromoo harka mootummaa Itoophiyaatti dabarte utuu seeraan lakkaawamee miliyoonatti siquu hinoolu. Haalli isaan ittiin ajjeefamanis jaarraa 21ffaa kana keessatti bakka kamittuu kan argamee hinbeekneefi dhugumaan nitaha jedhamee kan hinyaadamne. Kanaaf yoo namatti himan illee fiilmii sodaachisaa ykn â??horrorâ?? itti fakkaata malee dhugumaan namni nama irraa dhalate kana namarraan gaha jedhanii yaaduun nama rakkisa. Silaa waaheen reebamuufi dararamuu yoo kahe gosti isaa dubbatamee hindhumu. Kanaaf, mee kan ajjeechaa maal akka fakkaatu namoonni dur poolisa mootummaa Itoophiyaa tahanii isaan waliin dalagaa turanii booda hojii dhiisanii badaniifi ilmaan Oromoo dararaa kana irraa hafanii luubbuun jiran kan dhugaa bahan haa ilaallu.
â?¢ Hidhamtoota dhiiraa qaama saalaa irraa muranii nyaachisanii dhiigni keessaa yahee akka duhan gochuu.
â?¢ Loltuu humna addaa gadi itti dhiisanii aboottaafi dhiitichaan akka isaan laaffisan godhanii funyoodhaan hudhanii ajjeesuu.
â?¢ Burruusaan mataa dhahanii tuuta naachaatti gadi darbatanii nyaachisuu.
â?¢ Jiraatti arraba keessa kutanii fayyaa awwaaluu.
â?¢ Afaan gargar qabanii asiidii wagahanii akka qaamni isaanii ciccitee duhan gochuu.
â?¢ Gaazii/bobahaa itti firfirsanii dhaabbitti ibiddaan gubanii ajjeesuu.
â?¢ Konkolaataati hidhanii lafarra harkisanii eega laaffisanii booda konkolaataa sammuurra baasanii ajjeesuu.
â?¢ Dhagaa guddaa mormatti hidhanii harootti gadi darbatanii ajjeesuu.
â?¢ Tumanii ija keessaa baasanii fannisanii ajjeesuu.
â?¢ Waraananii onnee keessaa baasanii ajjeesuufi k.k.f.
Yeroo kun marti geggeefamu dipiloomaatotni biyyoota dimokiraatawaa tahanii heddun quba kan qabaniifi namoota rakkoon walfakkaatu irra gahee utuu hinduhin hafanii isaanitti iyyataniif illee homaa gochuu akka hindandeenye kan itti himan tahuun isaa dhala Oromoo tokko haalaan abdii kutachiisa. Haatahu malee, dhugaan tokko dagatamuu hinqabu-Oromoon addunyaa tana keessaa wal malee fira hinqabu. Kanaafi walii galee gamtaahee gabrummaa jalaa of baasuu qaba. Hireen Oromoo harkuma isaa keessa jirti!
Reply obsa shufa
9:03 AM on October 1, 2013
abdo galatoo namni beektan akkan na eertan isinin jedha ,yeroo dargi bade, hanga ammatti(2006 ALA) hin argamne
Reply ifaa hundumaa
10:39 AM on March 13, 2013
afaan aadaa fi seenaa ofii akka kanaan ibsuun bay`ee namatii tola .jaabadha waaqayyoo isiin waalin haa ta`uu